Vata vy tsy misy pentina, koveta lakozia, koveta fandroana - NODMA
Fandoroana vy Stainless
Sink vita tanana
Dobo filomanosana roa
Sink lovia tokana
Basin efitra fandroana
NODMA - mpisava lalana amin'ny avo lenta
mpamokatra eran-tany amin'ny fandoroana lakozia vy tsy misy pentina
MIVAROTRA IZAO INQUITY IZAO
Loka Innovation Design
Andro fanomanana santionany
NODMA dia manana modely maro isan-karazany, ao anatin'izany ny koveta vita amin'ny vy tsy misy pentina, ny faucets, ny koveta fandroana vy tsy misy vy ary ny kojakoja ara-barotra isan-karazany.Ny famolavolana vaovao momba ny vokatra dia afaka manampy anao hisambotra tsara kokoa ny tsena ary hanatsara ny firaiketan'ny mpanjifa.
Fandrefesana vy tsy mitongilana
NODMA stainless vy milentika dia be mpampiasa amin'ny hotely, trano fisakafoanana, trano fisotroana, ary andrim-panjakana.Tsy vitan'ny hoe tsara tarehy fotsiny izy io fa mora diovina amin'ny vy tsy misy pentina miaraka amin'ny kalitao tsara.Indreto ny fandoroana vy stainless telo ambony nataon'i NODMA ho fanondroanao:
Sink kely vita tanana miaraka amin'ny kaopy Rinser NQ466
Renivohitra vita amin'ny tanana mirenty SUS304 Stainless vy ota...
SUS304 Rectangular vilia baolina roa an-dakozia hilentika Wit ...
Multi-asa ambony tendrombohitra Kitchen Sink MT948B
Stainless vy efitra fandroana Products
Ny koveta sy ny niches vy tsy misy pentina dia mahasarika ny tontolo iainana sy maharitra.Ankoatr'izay, ny loko sy ny habeny samihafa dia afaka mifanena amin'ny fomba samihafa amin'ny haingon-trano.
Basin efitra fandroana amin'ny vy mahitsizoro
Basin efitra fandroana Boribory Stainless vy
Mpanamboatra lehibe amin'ny vokatra lakozia sy efitra fandroana
NODMA dia mpanamboatra sy mpamatsy ambony vy tsy misy vy matihanina any Shina manana traikefa 20 taona mahery.
NODMA dia mpanamboatra feno, mitarika ny indostria amin'ny famokarana vokatra lakozia sy efitra fandroana.
NODMA dia nanolo-tena hamaha ny karazana olana rehetra amin'ny fametrahana sy fampiasana mba hanomezana traikefa tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
VAKIO SY HENOY NY TANTARA
Akora Stainless Steel avo lenta
NODMA dia avy amin'ny POSCO stainless vy, izay azo averina 100% ary minamana amin'ny tontolo iainana.Ny akora manta miditra dia mitondra anao fampifangaroana tsara eo amin'ny hatsarana sy ny fiasa ary ny fiarovana ny tontolo iainana miaraka amin'ny endrika maoderina.
Azonao atao ny manafatra fanasan-damba mahazatra araka izay ilainao.Na ny mpanjifa aza dia mila milaza aminay ny tsena kendrena, ary hanamboatra ny vokatra ho anao izahay araka ny toetran'ny tsenanao.Manana vokatra famolavolana vaovao sy tsy manam-paharoa ihany koa izahay hanampy anao hisarihana ny sain'ny mpanjifanao haingana kokoa ka hisambotra ny tsena.
3 Andro Sample Delivery Time
Ny ekipa mpamokatra dia manana traikefa mihoatra ny folo taona amin'ny famokarana santionany.Ny fe-potoana telo andro ho an'ny santionany vita amin'ny tanana dia ahafahanao mahazo ny santionanao, manamarina ny kalitao ary mitsapa haingana ny tsena.
Vokatra sy kojakoja maro isan-karazany
Ny andiana vokatra NODMA dia misy koveta lakozia, koveta, koveta fandroana ary kojakoja.Ny koveta dia manana koveta tokana, koveta roa, koveta tokana misy solaitrabe, koveta roa miaraka amin'ny solaitrabe, ary koveta maro isan-karazany — vokatra isan-karazany mahafeno ny filan'ny mpanjifa samihafa.Fanampin'izany, ny faharetan'ny rendrika mba hihaona amin'ny traikefan'ny vokatra farany an'ny mpanjifa.
Inona ny akora amin'ny vokatrao?
Ny fitaovana dia SUS 304 stainless steel.
Ahoana no ahafantarantsika ny kalitao alohan'ny hametrahana ny baiko?
Misy santionany ho an'ny fitsapana kalitao.
Ahoana no ahafahantsika miantoka ny kalitao?
Manana santionany mialoha ny famokarana alohan'ny famokarana faobe.Manana fanaraha-maso feno izahay alohan'ny fandefasana;
Inona no maha samy hafa ny undermount sy ny topmount sink?
Apetraka eo ambanin'ny tampon-kaontenera ny fanapotehana ambany.Apetraka eo an-tampon'ny tampon-kaontenera ny fanapotehana mitete-in na topmount.
Inona avy ireo fepetra fandoavam-bola?
Matetika TT, na hafa araka ny fangatahanao.
Mahazoa SAMPLE MAIMAIMPOANA anio
Faly izahay mandre avy aminao!Mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny endrika mifanohitra, na mandefa mailaka aminay.Tia mandre avy aminao izahay!Mandefasa hafatra aminay amin'ny alàlan'ny endrika etsy ambany
Ahoana no hisorohana ny harafesina amin'ny vy tsy misy pentina
Inona no mari-pamantarana vy stainless vy tsara indrindra?
Serivisy Hotline: +86 13925333418
Adiresy: Nodma Home Technology, 110-1 Gaoping Avenue, Sanjiao Town, Zhongshan City, Guangdong Province
© Copyright 2021 : Zo rehetra voatokana.>